Kushambadzira Kwenhare: Ona Izvo Chaizvo Zvingaitika Nayo Iyi Mienzaniso | Martech Zone
Kushambadzira kwenhare - icho chinhu chaungave wakanzwa nezvacho, asi, sezvingabvira, chiri kusiya pane chinopisa kumashure izvozvi. Mushure mezvose, kune akawanda nzira dzakasiyana dziripo dzemabhizinesi, ko kushambadzira nhare hakusi iyo inogona kuregeredzwa?
Chokwadi - unogona kutarisisa pane iyo 33% yevanhu vasingashandisi nharembozha pachinzvimbo. Iko kushandiswa kwemidziyo yenharembozha pasi rose kunotarisirwa kukura kusvika ku67% na2019, uye isu hatisi kure izvozvi izvozvi. Kana iwe usingade kuregeredza chikamu chakakura chakadai chemusika, iwe unofanirwa kucherechedza kushambadzira nhare.
Mobile Kushambadzira Inoita Sense Kune Vatengi
Wakapedzisira riini kuenda iwe usina smartphone? Kana kuenda kumwe kunhu hakuna mumwe munhu anga ane imwe? Nharembozha, kunyanya mafoni, anotipa ruzivo rwatinoda nenzira iri nyore.
Tinogona kushandisa maapplication, chaiwo vabatsiri, uye kunyange kutarisa edu maemail. Zvishandiso zvedu hazviwanzo kusiya divi redu. Naizvozvo, hazvina musoro here kushambadzira bhizinesi rako kuvanhu pane mafoni avo?
Mobile Kushambadzira Inoita Sense kumakambani
Kuti uwane kuburitswa kwakaderera, iwe unogona kugadzira akasiyana siyana emishandirapamwe anoenderana nemusika wako uye bhajeti yako.
A yakagadzirirwa app, semuenzaniso, inogona kubatsira kutyaira kutengesa. ASDA yakaita izvi kubatsira kwayo kana zvasvika pakusimbisa kutengesa kwepamhepo. App yayo yakadzorwa mamirioni maviri nguva, zvichiratidza kuti vatengi vaida kuita nekambani. Kutengesa kuburikidza neapp ndiko kukwirisa ka2 kupfuura zvavari pakombuta yedesktop.
Pakazara, chirongwa ichi chakabudirira.
Asi maapplication haasi mhinduro yakakodzera yekambani yega yega. Chii chaunotarisa ipapo?
Inopindura Dhizaini Dhizaini
Walmart yakadzora yayo yakazara mutoro nguva kubva pa7.2 masekondi kusvika pamasekondi 2.3. Izvo hazvinzwika zvakanyanya kunakidza kusvikira iwe uchinzwisisa izvo zvakapoteredza 53% yevanhu bvisa saiti iyo inotora nguva inopfuura matatu masekondi kurodha.
Nekungogadziridza mafoto, kushandura mafonti, uye kubvisa Java kuvharira, Walmart yakakwanisa kudzikisa mutoro nguva yesaiti. Zvakabhadhara here? Tichifunga nezvekushandurwa kwemitengo kwakawedzera ne2%, zvakazoitika.
Nissan yakatora dhizaini inoteerera kune inotevera nhanho nekugadzira inopindirana vhidhiyo. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chaunofarira, pombi yakapusa pachiratidziro inokwana kuunza zvese zvakakosha zvinoitika. Mushandirapamwe uyu wakabudirira zvikuru nekupedza mwero we78% uye chiyero chekubata che93%.
Kushambadzira nharembozha chishandiso chine simba chinopa vashambadziri nzira dzakasiyana dzinoshanda zvakanyanya zvese maererano nemhedzisiro uye mutengo kukambani. Iyo inosanganisira zvakawanda kupfuura kungoita maapplication kana akagadziridzwa mawebhusaiti, zvakadaro.
Hezvino zvimwe zvaunogona kufunga nezvebhizinesi rako:
Nhare mbozha redirection
Kana, sebhizinesi, iwe uchida iyo yepamusoro ROI kana zvasvika kune yako yekushambadzira shandisa, nhare yekushambadzira inokupa iwe nzira yekusvika kune vatengi nemutengo wakaderera. Yasvika nguva yekuti kambani yako itange kukumbundira simba reichi chishandiso chinoshanda kwazvo.
Tarisa uone ino inoshamisa infographic kubva Vaparog.org, izere nemienzaniso, Mashandisiro anoita Mabhizinesi Nharembozha Kushambadzira kune Ivo Kubatsira. Appgeeks.org inopa vaverengi data rakakodzera nezve yepamusoro-notch nhare mbozha vanopa.
Tags: appgeeksasdaMAKARALI USBcarl's jrDunkin 'Donutsefordhalifaximba depotIkeaIn-mutambo shambadzoKLMlbmlocation based servicesmobile kushambadzira mienzanisoNhare mbozha redirectionNissanpizza hutdzikisa noticesQR Makodhired red innseattle zuva tanSMSStarbuckstaco bherotao kirabhu yemanherutopshopWalmart